कोरोनाविरुद्धको रुसी भ्याक्सिन : प्रभाकारिता र सुरक्षालाई लिएर विज्ञहरु सशंकित – NepalajaMedia
कोरोनाविरुद्धको रुसी भ्याक्सिन : प्रभाकारिता र सुरक्षालाई लिएर विज्ञहरु सशंकित
August 14, 2020 239
काठमाडौं, ३० साउन । रुसले विश्वमै सबै भन्दा पहिले कोरोना भ्याक्सिन बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । तर, रुसले चाँडै नै बजारमा ल्याउँदै गरेको उक्त कोरोना भ्याक्सिनको प्रभावकारिता र सुरक्षालाई लिएर विशेषज्ञहरुले शंका ब्यक्त गरिरहेका छन् ।
उक्त रुसी भ्याक्सिनको ट्रायल २ महिना भन्दा पनि कम समयमा गरिएको र मानिसको लागि सुरक्षित घोषणा गर्नु हतार हुने त होइन ? भन्दै विशेषज्ञाहरुले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत मंगलबार मात्रै कोभिड–१९ को पहिलो भ्याक्सिन तयार भएको घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रपति पुटिनले उक्त भ्याक्सिनले सबै आवश्यक परीक्षणहरु पार गर्दै कोरोना भाइरसविरुद्ध इम्युनिटी दिन सफल साबित भएको पनि बताइसकेका छन् ।
रुसले यस भ्याक्सिनको नाम सोभियत संघद्वारा लञ्च गरिएको विश्वकै पहिलो उपग्रहको याद गर्दै ‘स्पुतनिक वी’ राखेको छ । तर, हालसम्म यस भ्याक्सिनले तेस्रो चरणको ट्रायल भने पूरा गरेको छैन, जुन चाँहि हजारौं सहभागीहरुको उपस्थितिमा टेस्टिङ गरिनेछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमै दुई सय भन्दा बढी प्रतियोगीहरु छन्, जसले कोरोना भ्याक्सिन तयार गर्ने दाबी गरेका छन् । जसमध्ये पनि २४ प्रतियोगीहरुले आफ्नो भ्याक्सिनलाई मानिसमा ट्रायल गरिरहेका छन् ।
कोरोना भ्याक्सिनको ट्रायल कति आवश्यक छ ?
नयाँ भ्याक्सिन पास हुनका लागि सामान्यतय तीन चरणको ट्रायल पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा थोरै व्यक्तिमा भ्याक्सिनको ट्रायल हुन्छ, जहाँ भ्याक्सिनको सीमित डोज दिइन्छ ।
दोस्रो चरणमा मानिसहरुको केही संख्या बढाइन्छ र भ्याक्सिनको इम्युन रेस्पोन्स पत्ता लगाइन्छ । त्यस्तै, दोस्रो चरणमै भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट के कस्तो छ भनेर पनि पत्ता लागइन्छ ।
तेस्रो अर्थात् सबै भन्दा ठूलो चरणमा भ्याक्सिनको संक्रमित व्यक्तिमा प्रभावशाली के कस्तो छ भनेर जाँच गरिन्छ । उक्त तीन चरण सबै भन्दा महत्वपूर्ण चरणहरु हुन् । इम्युनिटीमा भ्याक्सिनको रेस्पोन्स दोस्रो चरणमै देखायो भने तेस्रो चरणको ट्रायल जरुरी ठानिन्छ ।
एक वेबसाइटका अनुसार रुसी अनुसन्धानकर्ताहरुले पहिलो र दोस्रो चरणको ट्रायक अगष्टको सुरुवातमै पूरा गरेका थिए । उक्त भ्याक्सिनको रेस्पोन्स उत्कृष्ट भएको दाबी गरिएको छ । उक्त भ्याक्सिनको नकारात्मक असर नभेटिएको दाबी गरिएको छ । तर, सोधकर्ताहरुले यस बारे कुनै पनि डिटेल्स रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
त्यस्तै, उक्त वेबसाइटमा तेस्रो चरणको ट्रायल ब्राजिल, म्याक्सिको, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्समा गरिने दाबी गरिएको छ । यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि रुसले बनाएको उक्त भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको ट्रायल पूरा गरेको छैन ।
वैज्ञानिकहरुले पहिलो र दोस्रो चरणको रिपोर्ट सार्वजनिक नगरिकन दाबी गर्नु मानिसका लागि सुरक्षित नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, तेस्रो चरणको ट्रायल नगरी भ्याक्सिनले काम गर्छ भनेर दाबी गर्नु पनि ठीक नभएको बैज्ञानिकहरुको भनाइ छ ।
रुसको भ्याक्सिनलाई लिएर केही देशहरुले हतार भएको बताइरहेका छन्, भने केही देशहरु भने रुसको भ्याक्सिनलाई लिएर निकै उत्साहित छन् । यता विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने रुसी भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायलको समीक्षा गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
Prevगोंगबु हत्या प्रकरण: कल्पनाको कर्तुतले अर्काको जग्गा कमाएर खाने बाबुआमा पनि कष्टमा
Nextसभापति देउवाद्वारा बेपत्ता व्यक्तिको चाँडो उद्दार गर्न माग
यिनै हुन भर्खरै बिवाह गरेर जीवनको नयाँ सुरुवात गरेका २५ वर्षीय शाही, श्रीमतीले शवलाई अंगालो हालेर धरधरी रोईंन (तस्विर सहित)
९ लाख बाती बलेको फोटोलाई हातले छुनुहोस र ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस, सारा दुख पाप काटिनेछ र लक्ष्मी प्राप्ति हुनेछ !